လေဖြတ်တော့မယ်ဆုိုတာ ကြုိုတင်သိနုိုင်တဲ့အချက်များ နှင့် ကာကွယ်နည်းများ. - Update New
November 25, 2018 Naing ကျမ္မာရေးဗဟုသုတ 0
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်သော WHOရဲ့ ကြေငြာချက်အရ သေစေတတ်သောရောဂါများအနက် လေဖြတ်ခြင်းဟာ တတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။လေဖြတ်ခြင်းကို အချိန်မီသိရှိပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိူးတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်လဲ လူတော်တော်များများက အချိန်မီမသိရှိနိုင်တာမို့ စောစီးစွာ ဆေးကုသမှုခံယူချိန်မရလိုက်ပါဘူး။
လေဖြတ်ခြင်းကို (၁)ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ခြင်း (၂)ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းဆိုပြီး ဆေးပညာအရ၂မျိူခွဲထားပါတယ်။
စစ်တမ်းများအရ လေဖြတ်ခြင်းရဲ့၈၀ရာနှုန်းက ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းဟာအဖြစ်များသလောက် အစပိုင်းတွင်ရောဂါ လက္ခဏာမပြသတာကြောင့် သိရှိဖို့လဲ ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဦနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောလေဖြတ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ ဦးနှောက်ဆီသို့ သွေးစီးဆင်းသောသွေးကြောတစ်နေရာတွင် သွေးခဲဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအခါပိတ်ဆို့သွားသောသွေးကြောနေရာရှိ ဦးနှောက်တစ်ရှူးမှာ တဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာပြီး ဦးခေါင်းခွံအတွင်းတွင် ပိုမိုနေရာယူလာရာမှ ဦးနှောက်အတွင်းသားဖိအားမြင့်တက်လာပါတယ်။
ထိုအခါ အလွန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ဦးနောက်တစ်ခုလုံးမှာဖိအားကိုခံစားလာရပါတယ်။ လေဖြတ်စဉ်မှာ ထိုလူရဲ့ ခြေ လက်များ လှူပ်မရနိုင်သလို သူ့ရဲ့စကားပြောအာရုံနဲ့ အကြားအာရုံတွေပါအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။တစ်ချိူ့သောလေဖြတ်ခြင်းတွေမှာဆို လူနာအနေနဲ့ ထင်ယောင်ထငိမှားတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အချိူ့သော လေဖြတ်ခြင်းအနုစားတွေမှာ လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်ခန့် သို့မဟုတ် မနေ့က အဖြစ်အပျက်များကိုပါ မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာပါက လူတစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်ရှားလို့မရတော့ပါ၊
ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ် လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ
– မျက်နှာ သို့ ခြေ လက်များ ရုတ်တရက်ထုံခြင်း၊အားနည်းခြင်း (များသောအားဖြင့် ကိုယ်တခြမ်းတည်း)
– စကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း သို့ ပြောသည်ကိုနားမလည်ခြင်း
– ရုတ်တရက် အလွန်အမင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းအောက်ပါလကဏများရှိပါကလဲ ဆရာဝန်ထံ အမြန်သွားပြဖို့လိုပါတယ်။
သင့်အနီးက လူတစ်ယောက် လေဖြတ်နေပြီဟု သံသယရှိပါက သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း
-သူ့ကို ပြုံးခိုင်းပါ။မျက်နှာ တစ်ခြမ်းရွဲ့မရွဲ့ကို အကဲခတ်ပါ။
-စာတစ်ကြောင်း ကိုထပ်ခါထပ်ခါရွတ်ခိုင်းပါ။စာလုံးများ ပီသမှန်ကန်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။လေဖြတ်သည်ဟု သံသယရှိပါက ချက်ချင်းဆေးရုံပို့ရပါမည်လေဖြတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိူးများကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပထမ၁နာရီအတွင်း ပို့နိုင်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Credit-Dr Jue (Daily Hot News)
လဖွေတျတော့မယျဆုိုတာ ကွုိုတငျသိနုိုငျတဲ့အခကျြမြား နှငျ့ ကာကှယျနညျးမြား.
ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျးကွီးဖွဈသော WHOရဲ့ ကွငွောခကျြအရ သစေတေတျသောရောဂါမြားအနကျ လဖွေတျခွငျးဟာ တတိယမွောကျဖွဈပါတယျ။လဖွေတျခွငျးကို အခြိနျမီသိရှိပါက နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိူးတှမေဖွဈအောငျ ကာကှယျနိုငျပမေယျ့လဲ လူတျောတျောမြားမြားက အခြိနျမီမသိရှိနိုငျတာမို့ စောစီးစှာ ဆေးကုသမှုခံယူခြိနျမရလိုကျပါဘူး။
လဖွေတျခွငျးကို (၁)ဦးနှောကျသှေးကွောပေါကျခွငျး (၂)ဦးနှောကျသှေးကွောပိတျခွငျးဆိုပွီး ဆေးပညာအရ၂မြိူခှဲထားပါတယျ။
စဈတမျးမြားအရ လဖွေတျခွငျးရဲ့၈ဝရာနှုနျးက ဦးနှောကျသှေးကွောပိတျဆို့ခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။သှေးကွောပိတျဆို့ခွငျးကွောငျ့လဖွေတျခွငျးဟာအဖွဈမြားသလောကျ အစပိုငျးတှငျရောဂါ လက်ခဏာမပွသတာကွောငျ့ သိရှိဖို့လဲ ခဲယဉျးပါတယျ။
ဦနှောကျသှေးကွောပိတျခွငျးကွောငျ့ဖွဈသောလဖွေတျရခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျးမှာ ဦးနှောကျဆီသို့ သှေးစီးဆငျးသောသှေးကွောတဈနရောတှငျ သှေးခဲဖွငျ့ပိတျဆို့ခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
ထိုအခါပိတျဆို့သှားသောသှေးကွောနရောရှိ ဦးနှောကျတဈရှူးမှာ တဖွညျးဖွညျးဖောငျးလာပွီး ဦးခေါငျးခှံအတှငျးတှငျ ပိုမိုနရောယူလာရာမှ ဦးနှောကျအတှငျးသားဖိအားမွငျ့တကျလာပါတယျ။
ထိုအခါ အလှနျခေါငျးကိုကျခွငျးဖွဈပျေါလာပါတယျ။ ထို့နောကျမှာတော့ဦးနောကျတဈခုလုံးမှာဖိအားကိုခံစားလာရပါတယျ။ လဖွေတျစဉျမှာ ထိုလူရဲ့ ခွေ လကျမြား လှူပျမရနိုငျသလို သူ့ရဲ့စကားပွောအာရုံနဲ့ အကွားအာရုံတှပေါအလုပျမလုပျနိုငျတော့ပါဘူး။တဈခြိူ့သောလဖွေတျခွငျးတှမှောဆို လူနာအနနေဲ့ ထငျယောငျထငိမှားတှပေါဖွဈလာတတျပါတယျ။
အခြိူ့သော လဖွေတျခွငျးအနုစားတှမှော လှနျခဲ့သော ၁ဝနှဈခနျ့ သို့မဟုတျ မနကေ့ အဖွဈအပကျြမြားကိုပါ မသှေ့ားတတျပါတယျ။ ပိုဆိုးလာပါက လူတဈကိုယျလုံး လှုပျရှားလို့မရတော့ပါ၊
ဦးနှောကျသှေးကွောပိတျ လဖွေတျခွငျးရဲ့ လက်ခဏာမြား
– မကျြနှာ သို့ ခွေ လကျမြား ရုတျတရကျထုံခွငျး၊အားနညျးခွငျး (မြားသောအားဖွငျ့ ကိုယျတခွမျးတညျး)
– စကားမပွောနိုငျတော့ခွငျး သို့ ပွောသညျကိုနားမလညျခွငျး
– ရုတျတရကျ အလှနျအမငျးခေါငျးကိုကျခွငျးအောကျပါလကဏမြားရှိပါကလဲ ဆရာဝနျထံ အမွနျသှားပွဖို့လိုပါတယျ။
သငျ့အနီးက လူတဈယောကျ လဖွေတျနပွေီဟု သံသယရှိပါက သငျဘာလုပျသငျ့သနညျး
-သူ့ကို ပွုံးခိုငျးပါ။မကျြနှာ တဈခွမျးရှဲ့မရှဲ့ကို အကဲခတျပါ။
-စာတဈကွောငျး ကိုထပျခါထပျခါရှတျခိုငျးပါ။စာလုံးမြား ပီသမှနျကနျမှု ရှိမရှိစဈဆေးပါ။လဖွေတျသညျဟု သံသယရှိပါက ခကျြခငျြးဆေးရုံပို့ရပါမညျလဖွေတျခွငျးရဲ့နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိူးမြားကို ကာကှယျဖို့အတှကျ ပထမ၁နာရီအတှငျး ပို့နိုငျပါက အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏ မူလစွမ်းအား တဲ့……